Ogaden News Agency (ONA) – Qalalaase Kabilowday Koonfurta Gobolka Gonder ee Deegaanka Axmaarada.
Qalalaase Kabilowday Koonfurta Gobolka Gonder ee Deegaanka Axmaarada.
Warar ay ONA ka heshay Gobolka Axmaarada ayaa tibaaxaya qalalaaso kabilowday Koonfurta gobolka Gonder ee Deegaanka Axmaarada. Sida warku sheegayo qalalaasaha ayaa bilowday kadib markuu nin shacab ah toogasho kudilay 6 kamid ah ciidanka sirdoonka ee wayaanaha.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay oo ONA lasoo xidhiidhay ayaa soo xiganaya in uu ninkan shacabka ah uu ka gadooday dhaqan xumada ciidanka wayaanaha ee kusugn gobolka Gonder oo dadka shacabka ah isugu dara boob, kufsi iyo waliba dil aan geed loogu soo gabanin.
Ninkan dilka gaystay oo lagu magacaabo Araga ayaa goobta kabaxsaday kadib markuu laayay askartan oo waliba
lasheegay in ay ahaayeen kuwo utaba baran howlaha afduubka iyo kaayitaanka shacabka. Sida aan warka kuhelay ninkan ayaa loo badinayaa in uu utagi doono jabhada Gimbot 7 Arbenyooj oo aagaas ka dagaalama.
Sidoo kale ninkan ayaa lagu soo waramayaa in uu qaatay hubkii ay wateen nimanka uulaayay wuxuuna sidoo kale
kaqaatay mobeladii ay siteen. Todobaadkii lasoo dhaafay ayaa nin dhalinyaro ah oo shacab ah isla gobolka Gonder kulaayay askar katirsan ciidanka Wayaanaha wuxuuna isu dhiibay jabhada Gimbot 7 Arbanyoj.
Dhinaca kale waxaa siixoogaysanaya kacdoonka shacabka ree Gonder oo hubka qaatay kadib markay u adkaysan waayeen gacan dheerarka ciidamada gumaysiga Itoobiya waxayna shacabku aamineen in xalka kaliya uu yahay in ay naftooda iyo maalkooda difaacaan. Waxaa isla gobolka Axmaarada dagaalo hubaysan kawada jabhada Gimbot 7 oo ah jabhad kasoo hotjeeda taliska macangaga ah ee wayaanaha.
Sikastaba ha ahaatee waxaa siibadanaya kacdoonada shacabka waxaana lasoconaa kacdoonada sida joogtada ah uga
socda Gobolka Oromia, Gobolka Tigrey iyo waliba Wadanka Ogadenia oo colaad gaamurtay ay ka aloosan tahay. Waxayna ciidamada gumaysigu umaara heli waayeen daminta colaadahan lagaga soo horjeedo xukuumada Wayaanaha.